သတင်း - ကောင်းမွန်တဲ့ UV လက်သည်းဆိုးဆေးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။
လက်သည်းအနုပညာလုပ်ငန်းက လူတွေက အရည်အသွေးကောင်းတယ်ဆိုတာ သိတယ်။လက်သည်းဆေးဂျယ်လက်သည်းပန်းချီနည်းပညာနှင့် တူညီသော်လည်း လက်သည်းဆေးကော်သည် လက်သည်းပန်းချီဆိုင်များကဲ့သို့ မညီမညာဖြစ်နေသောကြောင့် လက်သည်းပန်းချီဆိုင်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ဒါဆို ဘာတံဆိပ်လဲ။လက်သည်း UV ဂျယ်ကောင်းတယ်?ဘာတံဆိပ်လဲ။လက်သည်းဂျယ်လက်သည်းအမှတ်တံဆိပ်များစွာကို အသုံးပြုနေကြပါသလား?
အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းမှုလက်သည်းဂျယ်ထုတ်ကုန်များပထမဦးစွာကြည့်ရှုကြသည်။franchised အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက်၊ ၎င်းတို့တွင် Niou Jiayi နှင့် နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းလက်သည်းပန်းချီကော်များ ကဲ့သို့သော ၎င်းတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လ်အမှတ်တံဆိပ်များ ရှိပြီး OPI, CND, NAIL FOR ALL နှင့် Panafin တို့တွင် NAIL FOR ALL သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တစ်ဦးတည်းသော ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်သည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ ဤနိုင်ငံတကာ ပထမလိုင်းလက်သည်းပန်းချီကော်များသည် ထုတ်ကုန်များ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် အရည်အသွေးကို အာမခံနိုင်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Niou Jiayi သည် နာမည်ကြီး ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ် MOSTIVE လက်သည်းဆိုးဆေးကော်ကို အသုံးပြုသည်။လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်သဘာဝအပင်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ အလှတရားနှင့် ဖက်ရှင်သဘောတရားတို့ကို လိုက်နာပြီး ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ အဆိပ်အတောက်ကင်းကင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။ဖောက်သည်များနှင့် လက်သည်းအနုပညာရှင်များစွာတို့က ကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိထားသည်။တညီတညွတ်တည်း ချီးကျူးကြသည်။
NEWCOLORBEAUTY သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သူ.အရည်အသွေးမြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ဖို့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ ရေရှည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လက်သည်း UV gel ထုတ်ကုန်များ.လက်သည်းဂျယ်လ်ကို အလှအပနှစ်သက်သူများ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် စျေးကွက်နှင့်အညီ အန္တရာယ်ကင်းသော ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားရန် ကတိပြုထားပါသည်။.
စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ လက်သည်းခြေသည်း UV gel ထုတ်ကုန်တွေကို မရွေးချယ်နိုင်ရင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါတယ်။gel လက်သည်းဆိုးဆေးဖောက်သည်များအတွက် အနုပညာသည် အလွန်ကောင်းမွန်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပူဖောင်းများနှင့် အခြောက်ခံခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများလည်း ရှိနိုင်ကာ စတိုးဆိုင်၏ဂုဏ်သိက္ခာကို များစွာထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။အချို့သော လုပ်ငန်းရှင်များသည် franchised အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ပါက ၎င်းတို့သည် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော လက်သည်းဂျယ်ထုတ်ကုန်များပြီးတော့ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ လက်သည်းတွေကိုလည်း ဖောက်သည်တွေက သဘောကျနိုင်ပြီး သူတို့ကို ပြန်လာဖို့ ဆွဲဆောင်ပြီး သင့်အတွက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်ရှင်တွေအတွက်ကတော့ ဘယ်လိုလက်သည်းဆိုးဆေးတံဆိပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လ်တွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ဘေးကင်းမှုရှိဖို့က အဓိကပါပဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သင်ယုံကြည်ရသော လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်ကိုသာ သုံးစွဲသူများက ယုံကြည်နိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ လုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံမှုကို သေချာစေသည်။